Home Web Development Premium Sites
Created on Wednesday, 02 October 2013 07:00
Most Popular Package of Myanmars.net.
Possible to use CMS (Content Management System)
Member only password-protected pravite page
Using Photographs from Myanmars.Net photo Bank
Machine Translate to Other Languages
Search Engine Frendly Archutecture
Free Listing on Myanmars.Net Main Page
Own Login & Password to view detail vistor statistics
Website ကို Professional ရေးချင်းသူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
CMS (Content Managent Systen ) သုံးလို့ ရပြီး. မိမိဘာသာ အလွယ်တကူ ၀င်ပြင်လို့ရပါတယ်။
Member Regisrtaion Form ထားရှိနိုင်ခြင်း၊ Member Only Passowrd-Protect Pravite Page ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Customer Contact Form ပါရှိတဲ့ အတွက် Websiteလာရောက်ကြည့်ရှု့သူများ နေဖြင့် ၂၄ နာရီလုံးလုံး အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Flash, Animation တွေနဲ တကယ့်ကို Professional Deisgn ​ရေးဆွဲပေးပါတယ်။
Language Translation ပါရှိတဲ့ အတွက် ကိုယ့် website ကို ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးနဲ ဖော်ပြ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ် လူကြည့်နှုန်းစာရင်းကို report လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း Dailly ၀င်ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Myanmars.Net ရဲ့ Main Page မှာ သက်ဆိုင်ရာဏ္ဍ အလိုက် Listing ထည့်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြည့်နှုန်း များစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်.။
Company ကြီးတော်တော်များ ဒီ Package ကို ယူကြပါတယ်။
Myanmars.Net ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဓာတ်ပုံတွေကို သုံးပေးတဲ့ အတွက် ကိုယ်ပိုင်ပုံမရှိတဲ့ Tourism Company တွေ နှင့် Website ကို Professional ရေးဆွဲချင်သူတွေ အထွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း : 500,000++ ကျပ်
နောက်နှစ် သက်တမ်းတိုး : 300,000++ ကျပ်
*** Commercial Tax5% will be add on total amount.
Yangon Airways She Shines Gems Thande Beach Hotel
Golden Hill Tower Yuzana Hotels Tast of Myanmar Travels